महिनावारीको बारेमा भ्रम र यथार्थ, सबै महिलाहरुले जान्नु आवश्वय ! – ejhajhalko.com
२० पुष २०७४, बिहीबार ०४:३४ 456 पटक हेरिएको
–मासिक धर्मको पिडा
–मन लागेको जे पनि खान सक्नुहुन्छ
महिनावारी भएको समयमा केहि पनि खान नछोड्नुहोस् । तपाईंलाई मन लागेको जे पनि खान सक्नुहुन्छ । महिनावारी भएको पाँच दिनका लागि विशेष डाइट चार्ट अनुसार खान आवश्यक
–महिनावारीको समयमा शरिर कमजोर हुने गर्दछ !
यो कुरामा केहि पनि सत्यता छैन । तपाईंको शरिर रगतको कमीले कमजोर हुँदैन । यो सत्य हो कि महिनावारीको दौरान तपाईंको शरिरमा १५० मि.लि. रगतको कमी हुने गर्दछ जुन मात्र ४-५ चम्चा हुने गर्दछ ।
–महिनावारी रगत फोहोर हुने गर्दछ
–व्यायाम गर्नु हुँदैन